China High Quality Battery Holder Aa ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
Battery Holder Aa သည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Lead wire နှင့် connector ပါသောဤ Battery Holder Aa သည် 6V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
Battery Holder Aa ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
ခဲဝါယာကြိုးနှင့် connector ပါ ၀ င်သော Battery Holder Aa သည် AA သာမန်ဓာတ်ခဲလေးလုံးသို့မဟုတ်အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီလေးလုံးကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ သာမန်ဘက်ထရီများသည် 6V ဗို့အားကိုထုတ်နိုင်ပြီးပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သောဘက်ထရီများသည် SCM စနစ်၊ Arduino စနစ်၊ အခြားအသိဥာဏ်ရှိသောကားများ၊ ခြေရာခံကားများအတွက်သုံးနိုင်သည်။
KEYU အမှတ်တံဆိပ် Battery Holder Aa ကို ၁၀၀% ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
Battery Holder Aa ၏ ၂။ ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ထုတ်ကုန်အမည် AA ဝါယာကြိုးနှင့်အပေါက်ပါသော AA ဘက်ထရီအဖုံးကိုင်ဆောင်သူ
အမျိုးအစား Cylindrial ဘက်ထရီပိုင်ရှင်
ပစ္စည်း: PP/ABS + နွေသံမဏိနီကယ်ချထားတဲ့
အရွယ်အစား: 108.8* 32.5* 15.5 mm
ခဲကြိုး 40mm, UL1007 AGW#26, BL ACK & အနီရောင်
အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 6V ပါ
၃။ ဘက်ထရီသိုလှောင်သူ၏ Aa ၏ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်နှင့်အသုံးချမှု
၁။ ခဲဝါယာကြိုးနှင့် connector ပါ ၀ င်သောဤ Battery Holder Aa ကို 6v ဘက်ထရီအထွက် (1.5v X4= 6v) ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၄။ AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံးကိုကိုင်ထားပါ။
Battery Holder Aa ၏ 4. Product Details
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: AA ဓာတ်ခဲအဖုံးကိုင်ဆောင်ထားသောခဲကြိုးနှင့်အဆက်အစပ်ပါ ၀ င်သည်
ပစ္စည်း: PP/ABS + နွေသံမဏိနီကယ်ချထားသော
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: Cylindrical ဘက်ထရီ
Battery Holder Aa ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Battery Holder Aa အားလုံး
Battery Holder Aa ၏ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း
7. Battery Holder Aa ၏အမေးအဖြေများ
၄။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ကားရောင်းသူ၊ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုအနည်းငယ်ရနိုင်သလား။
၅။ ငါ quotation တစ်ခုရချင်ရင်ငါဘာသတင်းအချက်အလက်ကိုမင်းကိုအသိပေးသင့်လဲ။
၁။ ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်းနံပါတ် (သို့) ပုံ (သို့) ပုံဆွဲပါ
အော်ဒါတစ်ခုလျှင် ၃ ကြိမ်နှုန်းနှင့် ၀ ယ်ယူမှုအကြိမ်ရေ
hot Tags:: Battery Holder Aa၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်သူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သူ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်
ဘက်ထရီ Case Holder